နိုဝင်ဘာလ 9, 2018 နိုဝင်ဘာလ 27, 2018
ပိတ်ပင် Quo Vadis နည်းပြ? Webinars, 2018
ဒီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနည်းပြတစ်ဦးအစွမ်းထက်လိုင်း-Up ဖြစ်သွားကတည်းက, သင့်ပြက္ခဒိန်အထိမ်းအမှတ်ပေးပါ။ အင်္ဂလိပ်, စပိန်နှင့် Mandarin တွင်ကျင်းပအစည်းအဝေးများရှိလိမ့်မည်။ လမ်း Quo Vadis သနည်း နည်းလမ်း, "ဘယ်မှာသငျသညျ? သွားကြသည်" သို့မဟုတ် "ဘယ်မှာသင်ခေါင်းနှစ်လုံးနေကြသနည်း" ။ ရှာကြစို့။
အဆိုပါအစည်းအဝေးများကဒီမှာ Facebook ကအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျဝင်သောအခါကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏ "လိုပဲ" ပေးပါ:
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 26th, 7: 30 နံနက် EST, 8: 30 ညနေဟောင်ကောင် (Mandarin အဘိဓါန်)
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 26th,9နံနက် EST (8 နံနက် CST): (7: 30 ညနေ, ဘန်ဂလိုအချိန်): (အင်္ဂလိပ်စာ)
ပွားကျွမ်းကျင်: ပွားနည်းပြ Mastery ဖို့ Path ထှနျးလငျးပေးပါကဘယ်လို
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 26th,2ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (စပိန်)
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 27th,9နံနက် EST (8 နံနက် CST): (အင်္ဂလိပ်)
ပိတ်ပင်အတူ Master နည်းပြဖြစ်လာ
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 27th,2ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (စပိန်)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28 - 7: 30 နံနက် EST, 8: 30 ညနေဟောင်ကောင် (Mandarin အဘိဓါန်)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28th,9နံနက် EST (8 နံနက် CST): (အင်္ဂလိပ်)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28th,2ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (စပိန်)
ကြာသပတေးနေ့နိုဝင်ဘာလ 29th,9နံနက် EST (8 နံနက် CST): (အင်္ဂလိပ်)
လယ်ပြင်၌နည်းပြနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်လက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများ၏ Cross-ယဉ်ကျေးမှု Origins
ကြာသပတေးနေ့နိုဝင်ဘာလ 29th,2ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (စပိန်)
သောကြာနေ့နိုဝင်ဘာ 30th, 7: 30 နံနက် EST, 8: 30 ညနေဟောင်ကောင် (Mandarin အဘိဓါန်)
သောကြာနေ့နိုဝင်ဘာ 30th,9နံနက် EST (8 နံနက် CST): (အင်္ဂလိပ်)
သောကြာနေ့နိုဝင်ဘာ 30th,2ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (စပိန်)
သငျသညျဤကွီးစှာသောပိတ်ပင် Quo Vadis နည်းပြအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ချင်ကြပါဘူးကတည်းကနောက်တဖန်, သင်၏ပြက္ခဒိန်အထိမ်းအမှတ်ကျေးဇူးပြုပြီး? Webinars ။